Google Ads Data Hub tijaabada liisaska dhagaystayaasha ee ololaha bandhiga, ku daraya astaamo cusub | BehMaster
Bogga ugu weyn/Content Suuq/Google Ads Data Hub tijaaba liiska dhageystayaasha ee ololaha bandhiga, isagoo ku daraya astaamo cusub
Google Ads Data Hub tijaaba liiska dhageystayaasha ee ololaha bandhiga, isagoo ku daraya astaamo cusub
Google's Data Hub, oo ah goobta falanqaynta iyo cabbiraadda xogta ololaha Google, ayaa ku dhawaaqday horumarin soo socota Khamiista. Waxa kale oo la xaqiijiyay in ay beta tijaabinayso kicinta dhagaystayaasha ee ololayaasha bandhiga.
Shirkaddu waxay sheegtay inay cusboonaysiisay kaabayaasha aasaasiga ah ee Xayeysiisyada Xogta Hubka (ADH) si ay awood ugu yeelato inay gaadhsiiso macaamiil badan oo ay u fududayso weydiinta.
U dhow falanqaynta waqtiga-dhabta ah. Google waxa ay sheegtay in ay hoos u dhigtay daahitaanka laga soo bilaabo 24-48 saacadood ilaa 6 saacadood ee soo bandhigida iyo xayaysiisyada YouTube ee Google Ads iyo xayaysiisyada YouTube ee lagu soo gatay Muujinta & Video 360 xaaladaha qaarkood.
Isku xirka koontada is-adeegga. Isticmaalayaashu waxay dhawaan awoodi doonaan inay ku xidhaan xayeysiiskooda Google, Maareeyaha Ololaha iyo Bandhiga & Fiidiyowga 360 akoonnada ADH kaligood. Waxaad sidoo kale awood u yeelan doontaa inaad abuurto qaabab xisaabeedyo badan. Awoodan ayaa la heli doonaa toddobaadyada soo socda.
Falanqaynta Sandbox. Deegaanka tijaabada Sandbox waa u diyaar dhammaan macaamiisha. Waxay haysaa xog urursan oo diyaar u ah in lagu tijaabiyo qorista waydiinta oo hel dareen fiican oo aad ku samayn karto xogtaada.
Qaababka weydiinta. Waxaa jira 20+ qaab oo loogu talagalay noocyada falanqaynta guud ee ADH. Nashqada Dhammaan dhacdooyinka, tusaale ahaan, Google wuxuu leeyahay waxaa loo isticmaali karaa in lagu helo aragtiyo, dhagsiinno, beddelaad iyo Aragti Firfircoon (mitirka aragtida Google) ee koontada. Isticmaalayaashu waxay soo gudbin karaan fikrado template cusub iyaga oo u maraya foomka jawaab celinta ee goobta.
Tijaabinta firfircoonida daawadayaasha. Google ayaa xaqiijisay inay tijaabinayso awooda lagu dhisayo liisaska dhagaystayaasha iyadoo lagu salaynayo gujisyada ama beddelka Google Ads, Maareeyaha Ololaha iyo Bandhiga & Fiidiyowga 360, oo markii ugu horaysay uu soo sheegay AdExchanger. Dhegaystayaashaas ayaa markaa loo dhaqaajin karaa si ay u soo bandhigaan xayeysiisyada Google iyo Bandhigga & Fiidiyowga 360. Ma daboosho dhagaystayaasha Google Search, YouTube, ama agabka Google O&O kale.
Sida laga soo xigtay Google, liisaska waxaa loo isticmaali karaa si loo gaaro ama looga saaro dhagaystayaasha. Dhaqdhaqaaqa dhegeystayaasha-iyo sida had iyo jeerba-waxaa jira shuruudo la isku daray oo ah ugu yaraan 50 isticmaale si loo soo saaro xog kasta oo ka timaada Xayeysiiska Xogta Hubka.
"Tusaale ahaan, waxaad ka dhex abuuri kartaa liiska dhagaystayaasha gudaha Xayeysiiska Xogta Hubka isticmaalayaasha kuwaas oo horay u iibsaday alaabtaada, ka dib u isticmaal liiska ka saarida si aad u hubiso inaadan sii wadin inaad tusto xayaysiisyadaada laguugu adeego Google Ads and Display & Video 360," ayay shirkaddu tiri.
Tiro yar oo summadaha ganacsiga ah iyo wakaalado waaweyn ayaa hadda ku jira beta.
Sababta aan u danayno. Firfircoonida daawadayaasha beta waxay tilmaamaysaa horumar ka baxsan cabbirka iyo falanqaynta Xayeysiiska Xogta Hub. Ogow in daawadayaasha aan la geyn karin Google Search, YouTube ama guryaha kale ee O&O.
Cusbooneysiinta kale waa in ay fududeeyaan isticmaalka adeega oo ay kordhin karaan korsashada. Google waxa ay sheegtay in in ka badan 200 oo summada, wakaaladaha iyo la-hawlgalayaasha cabbiraadda ay hadda isticmaalayaan adeegga iyo in su'aalaha ay kordheen 145% 2019 ka 2018.
Xayeysiiska Xogta Hub ayaa la bilaabay 2017 si loogu cabbiro qalabka iskutallaab ee ololayaasha dhex mara xayeysiiska Google. Suuqgeeyayaashu waxay sidoo kale ku xidhi karaan CRM-kooda, DMP iyo sidoo kale bixiyeyaasha cabbiraadda dhinac saddexaad si ay ugu dhejiyaan dhinacooda koowaad iyo xogta xaqiijinta dhagaystayaasha ee falanqaynta. Si kastaba ha ahaatee, xayaysiiyayaasha kama soo saari karaan mid ka mid ah xogta dhagaystayaasha heerka aragtida nidaamka.
Sida Looga Faa'iidaysto Boostada Blog-ga ee Meheradaha Yaryar
Facebook Messenger Equette for Brands: 10 shay oo aan la samayn